Maka: phuma | Martech Zone
I-Bounce Exchange: Kuyini ukuphuma kweNhloso?
ULwesihlanu, February 7, 2014 NgoLwesithathu, Februwari 24, 2016 Douglas Karr
Kungenzeka ukuthi ubonile kubhulogi yethu ukuthi uma igundane lakho lisuka ekhasini futhi liqonde kubha yekheli (futhi awubhalisanga), kuvela iphaneli yokubhalisa. Isebenza ngokukhazimulayo… futhi sikhuphule imizamo yethu yokuthola ababhalisile kusuka kumashumi kuya kwamakhulu njalo ngenyanga. Lokhu kwaziwa njengenhloso yokuphuma. IBounce Exchange inobuchwepheshe obunelungelo lobunikazi be-Exit-Intent technology obuka ukuthinta kwegundane, ijubane legundane, indawo yegundane, kanye